Dibadda xun: waxa ay yihiin, sifooyinka iyo cawaaqibka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 12/05/2022 12:00 | Deegaanka
Dibad-baxa taban waxa loola jeedaa dhammaan noocyada waxyeelada leh ee bulshada, oo ay abuuraan waxqabadyada wax-soo-saarka ama isticmaalka, kuwaas oo aan ku jirin kharashkooda. Xagga deegaanka, bini'aadamka iyo noolaha dibadda xun Aad bay muhiim u yihiin in la falanqeeyo.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u hurayn doonaa inaanu kuu sheegno waxa dibadda taban, sifooyinkooda iyo cawaaqibka ugu muhiimsan ee deegaanka.
1 Waa maxay dibadda taban
1.1 dibadda togan
1.2 dibadda xun
2 Sidee loo xakameeyaa dibadda taban oo kor loogu qaado kuwa togan?
3 Tusaalooyinka dibadda taban
Waa maxay dibadda taban
Waxaan ku qeexi karnaa dibadda sida saameynta labaad ee ay keento dhaqdhaqaaqa shaqsi ama shirkad aan mas'uul ka ahayn dhammaan cawaaqibta bulsho ama deegaan ee hawshaas.
Guud ahaan, waxa jira laba nooc oo dibadda ah, mid togan iyo mid taban, kuwaas oo aynu hoos ku balaadhin doono. Si aad si fiican u fahamto: Tusaalaha cad ee dibadda togan waa wasakhda ay warshaduhu ka soo saaraan deegaanka marka ay baabuurta soo saarayaan. Shirkaddani waxay mas'uul ka tahay soo iibsiga agabka, u beddelashada baabuurta iyo iibinta, laakiin marka la eego dibadda xun ee hawlahan, waxaa laga yaabaa in ay isticmaasho mishiin aad u wasakhaysan habka wax soo saarka, cawaaqib xun oo deegaanka ah.
Dibad-baxyada togan waa dhammaan saamaynta togan ee hawlaha xubnaha bulshada, ee maaha mid ku kooban kharashyada ama faa'iidooyinka hawlahaas. Qeexitaanka dibadda togan oo aan ku koobnayn goob ama cilmi gaar ah, oo ay ku jiraan dhammaan saamaynta togan, mid weyn iyo mid yarba, ee ficillada shakhsi ama shirkad kasta ay ku yeelan karaan bulshadeena.
Waxaan ka hadleynaa cawaaqib togan oo aan ku jirin kharashka wax soo saarka ama qiimaha iibka, laakiin kuwaas oo keeni kara natiijooyin aad u faa'iido leh bulshada guud ahaan. Maalgelinta isbitaallada iyo shaybaarada si loo helo dawooyinka cudurrada qaarkood ayaa tusaale u ah. Marka hore, waxaa laga yaabaa in qofku u maleynayo in ballan-qaadkan R&D waxay ku kici kartaa wax badan haddii cilmi-baarayaashu aysan dhaqso u helin dawo.
Xaqiiqdu waxay noo sheegaysaa liddi ku ah, in hawlaha noocan ahi ay aad lagama maarmaan u yihiin fayo-qabka iyo caafimaadka dadka, mar dhow ama hadhowba waxaa la heli doonaa daawo yaraysa saamaynta cudurka la xidhiidha. Dawadan oo waqti qaadan doonta in la helo, laguna daro maalgashi dhaqaale oo baaxad leh, waxay bulshada ku yeelan doontaa muuqaal aad u wanaagsan oo dibadda ah iyadoo badbaadinaysa kumanaan qof, balse taasi kama muuqato baaritaannada la sameeyay iyo kuwa la soo wajahay muddada dheer.
Sidoo kale, waxa jira hawlo kale oo badan oo bulshada u dhalin kara muuqaal wanaagsan, kuwaas oo iyaguna lama huraan u ah hawl-qabadkeeda habboon:
In la maal galiyo ilaalinta alaabta guud (wadooyin, dhismayaal, jardiinooyin, garoomo, isbitaallo).
waxbarashada ( dayactirka dugsiyada, macalimiin tayo leh, manhaj ku filan).
Baaritaanka Caafimaadka (talaalada, daawooyinka, daawaynta cusub).
Si ka duwan dibadda togan, debedda taban waa natiijada ka dhalata samaynta hawl kasta oo dhibaato u gaysanaysa bulshada, oo aanay ku jirin kharashkeeda. In kasta oo aan la tacaaleyno fikradaha laga soo bilaabo dhinaca dhaqaalaha, fikradahan waxaa laga saari karaa meel kasta oo nolol maalmeedka ah.
Tusaalaha wanaagsan ee dibadda taban waa wasakhowga deegaanka, gaar ahaan warshadaha, ee shirkadaha waaweyn. Bal qiyaas kiis shirkad weyn oo macdanta ah oo ku takhasustay soo saarista iyo habaynta dhuxusha. Marka la cabbirayo kharashka ku baxa hawl-qabad, kuma xisaabtamaan heerka sare ee wasakhowga ee ay u keeni karto deegaanka. Tan waxaa loo arkaa dibadda taban iyo Waa natiijada habka wax-soo-saarka shirkadda. oo aan ka muuqan qiimaha iibka iyo kharashka soo saarista dhuxusha.
Haddii aan istaagno oo aan ka fikirno, ku dhawaad ​​​​dhammaan falalka waxay leeyihiin bannaanka xun ee bulshada. Tusaale ahaan, isticmaalka tubaakadu waxay leedahay waxyeellooyin waxyeello u leh caafimaadka isticmaalaha, laakiin waxay abuurtaa waxyaabo xunxun oo dibadda ah sida qiimo-dhaca kaabayaasha (haddii uu qofku qol ku dhex cabo sigaar, darbiyadu way midab-beeli karaan oo qiiqu wuu dhaawaci karaa), waxaanay xataa saamayn xun ku yeelan kartaa caafimaadka qofka (Bukaannada neefta qaba ee qiiqa sigaarka ku neefsanaya).
Sidee loo xakameeyaa dibadda taban oo kor loogu qaado kuwa togan?
Dawladdu waxay leedahay tillaabooyin lagu xakameynayo laguna yareynayo abuurista waxyaabaha dibadda ka imaanaya, sida:
Canshuur shirkadaha ugu wasakhaysan si kor loogu qaado isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo iyo hababka wax soo saarka waara.
Habbee hawlaha qaarkood (tusaale ahaan, sigaar cabista, isu socodka magaalooyinka waaweyn).
Barnaamijyada waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada.
Dhanka kale, waxa kale oo jira habab kor u qaada oo kordhiya dibadda togan ee ay soo saaraan shirkadaha iyo dadku:
Deeqaha xarumaha waxbarashada (xanaanada, dugsiyada, iwm.).
Bixinta maalgelinta cilmi-baarista iyo horumarinta, gaar ahaan dhinacyada sayniska iyo caafimaadka.
Arrimaha dibadda, ha ahaato mid togan ama mid xun, kuma jiraan oo kaliya dhanka dhaqaalaha bulshada. Nooc kasta oo dabeecad ah, sida sigaar cabista ama ku tuurista balaastiigga laamiga, waxay yeelan kartaa saameyn gaaban/dheer oo bulshada ah, taas oo noqon karta mid xun ama mid togan, iyadoo ku xiran habdhaqanka.
Tusaalooyinka dibadda taban
Aynu ka fikirno, dhammaan ficiladayada, si kasta oo ay inoogu yar yihiin, saamayn ayay ku leeyihiin dadka intiisa kale ee ay ka kooban tahay bulshadeena.
Dibad-baxyo taban ayaa soo baxa marka falalkaas Waxaan u qaadannaa sidii shirkado, shakhsiyaad ama qoysas ku jira hawlo ay leeyihiin saamayn labaad oo waxyeello u leh dhinacyada saddexaad. Saamayntan kuma jiraan wadarta qiimaha. Saamaynta xun ee xooga la saarayo kuma jiraan wax soo saarka ama qiimaha adeegyada guud ee xilligan la isticmaalo.
Dibad-baxyada taban, sida dibadda togan, Waa fikrad dhaqaale. Laakiin waa in la ogaadaa in kuwan si isku mid ah loogu dabaqi karo meel ka baxsan adduunka dhaqaalaha. Markaa, dhaq-dhaqaaqyada dhaqaale ma dhaliyaan waxyaabo dibadda ah, laakiin sidoo kale hawlaha loo aqoonsaday inay yihiin kuwo aan dhaqaale ahayn.
Waxyaalaha dibadda ah ayaa la daremayaa oo saameyn toos ah oo aan ku jirin qiimaha lagu bixiyo wax soo saarka, isticmaalka ama isticmaalka.
Tusaalooyinka dibedda taban ee hoos ku qoran ayaa naga caawin kara si aan u sii qoto dheereyno fahamkayaga arrimaha dibadda. Waxaan ognahay in ilaha dibedda taban ay noqon karaan kuwo aan dhammaad lahayn. Si kastaba ha ahaatee, tusaale ahaan, waxaan ku tilmaami karnaa kuwan soo socda.
qashinka shucaaca iwm
buuqa matoorka aad buu u badan yahay
Waxaa la qiyaasi karaa in dibedda taban ay tahay silsilad weyn oo ficil ah oo saameyn ku leh kharashka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto dibadda xun iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » dibadda xun
dhaqdhaqaaqa iyo tamarta suurtagalka ah